Global Voices teny Malagasy » Shina: Noteren’ireo Mpiasam-panjakana Mpanao Kolikoly Hanala Zaza Nefa Efa Tara Loatra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Jona 2012 2:01 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fahasalamàna, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
Nieli-patrana manerana ny fampahalalam-baovao sosialy sy ny sehatra fitorahana bilaogy kiritika ka niteraka fenehoan-kevitra an-katezerana ny sarinà vehivavy iray tao amin’ny faritanin’i Ankang Shaanxi, ao Shina noterena hanala zaza tamin’ny fotoana efa tara. Mampiseho vehivavy matory eo ambonin’ny fandriana miaraka amin’ny fatin-janany 7 volana ny sary [Fampitandremana: mampihoron-koditra ny sary ]. Nisafidy ny tsy hanivana izany vaovao izany ny governemanta. Ho solon’izany, ny tenifototra “bevohoka 7 volana noterena nesorina” no malaza hita amin’ny vaovao 10 voalohany amin’ny tranokala fampahalalam-baovao sosialin’ny Sina Weibo .
Tamin’ny taona 1980, nampiditra ny politikan'ny zaza tokana  i Shina izay mametra ireo mpivady marobe tsy hiteraka mihoatra ny 1, nisy kosa ny fepetra manokana maromaro ho an’ny mpivady tambanivohitra, sy ho an’ny olona tsy manana mpiray tampo, ary ny hafa. Nampiharina izany politika izany eny anivon’ny faritany amin’ny alalan’ny fandoavana onitra. Araka ny voalazan’ny lahatsoratra tao amin’ny Radio Free Asia  tamin’ny 12 Jiona 2012, niampanga ireo manampahefana misahana ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana ao an-toerana ilay renim-pianakaviana, Feng Jiame, noho ny fanerena azy hanala zaza satria tsy nandoa ara-potoana ny onitra RMB 40,000 (eo amin’ny $6,000 USD).
Na dia mandalo fanadihadiana aza ankehitriny ireo manampahefana ao Shaanxi ary na dia efa nanipika koa aza ny fampahalalam-baovaom-panjakana fa tsy ara-dalàna ny fanalan-jaza taraiky loatra ao Shina ka tokony tsy holeferina mihitsy , nivonton-katezerana hatrany ny mpiserasera, ary nilaza fa efa fanao mahazatra izany paikady tsy mitsinjo ny maha-olona izany na dia eo aza ny lalàna.
afisy naverina navoaka milaza hoe: ‘Ataovy tsara ny asa fandrindrana fiainam-pianakaviana mba hampiroborobo ny fandrosoana ara-toekarena, Zhang Zhenhua, 1986 – navoaka tao amin’ny Flickr, IISG (CC BY 2.0)
Indreto fanehoan-kevitra vitsivitsy tao amin’ny Weibo:
@牵手白头kx：Tsy seho-miavaka ao Shina izany. Taona vitsy lasa izay, manampahefana misahana ny fandrindrana fiainam-pianakaviana no nikasa handroba ny vokatra, ny omby vavy, ny fitaovana mandeha amin’ny herinaratra sy ny fanaky ny olona amin’ny andro mazava be nanahary. Sahala amin’ny sarimihetsika mampiseho ny fomba nidiran'ny miaramila Japoney tamin’ireo tanàna kely sinoa (nandritra ny Ady Lehibe Faha-II). Sosialisma miendrika toetra sinoa izany!
@中华飘：Maro ny tantara ao ambadiky ny fanalan-jaza an-katerena. Eny amin’ny faritra ambanivohitra, fomba efa mahazatra ny tsy maintsy andoavanao vola vao afaka miteraka zaza hafa indray. Niteraka fanararaotana teo amin’ny manampahefana misahana ny fandrindrana fiainam-pianakaviana mba hahazoany tombotsoa ny hevitra ntaolo sinoa amin’ny fihazonana ny isan’ny fianakaviana
@北京奔驰宝马配件商：Raha afaka mandoa vola ara-potoana indray ianao, afaka ateraka tsara ny zaza fa raha tsy izany dia maty . Vola ho takalon’ny aina. Mitantana ny aina sy ny fahafatesana ny birao misahana ny fandrindrana fiainam-piavana sinoa, izy no tempolin’i Yama. Mankaiza avokoa ny vola rehetra? Ankehitriny, fantatrao ny antony mahatonga anay manana manampahefana maro mpanao kolikoly . Hita n’aiza n’aiza izany fanao izany, indrindra eny amin’ny tanàna somary lavitra, nampiseho indray ity politika ity fa tsy manaja ny zon’olombelona i Shina.
@岽鎏芝罘：Nanomboka tamin’ny taona 80 (ny fiandohan’ny politika momba ny zaza tokana) mandraka ankehitriny, firy no isan’ireo aina tsy manan-tsiny nafoy? Firy ny isan’ireo fianakaviana rava? Firy ireo vehivavy mijaly noho ny homamiadan’ny nono sy ny tranon-jaza? Firy ireo vehivavy noterana tsy maintsy hanala zaza? Firy ireo mpiasam-panjakana nanararaotra nandroba ny volam-bahoaka? Famonoana aina an-tapitrisany ara-dalàna io, ny politika manitsakitsaka ny zon’olombelona mbola tsy nisy toa azy teo amin’ny tantara
唯一__Single: Tsy azo ekena. Tsy tranga miavaka izao. Mpitranga matetika ny karazan-javatra toy izao saingy tsy vitan’ny lalàna sinoa ny manafay ireny fihetsika ireny. Izany no antony mahatonga ireo mpanankarena mandao an’i Shina.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/06/29/34318/
 politikan'ny zaza tokana: http://en.wikipedia.org/wiki/One-child_policy
 tokony tsy holeferina mihitsy: http://www.globaltimes.cn/content/714595.shtml